एमालेमा तपाईलाई उपयुक्त स्थान नदिएको झोँक त होइन नी ? म तपाईलाई भन्छु, नवौँ महाधिवेशन भन्दा अगाडि झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष भएको बेलामा उहाँहरुले मलाई पार्टीमा आउनु प¥यो भनेर निम्ता गर्नुभयो । पहिले विष्णु पौडेल, अनि इश्वर पोखरेल, त्यसपछि युवराज ज्ञवालीसँग तीन चरणको कुरा मेरै घरमा भयो । त्यसपछि अध्यक्षकोमा जाउँ भनेर झलनाथजीको घरमा स्थायी समितिका शंकर पोखरेल बाहेकसबै नेताहरुसँग लामो छलफल भयो । उहाँहरुले मलाई पोलिटव्यरोमा आउन आग्रह गर्नु भयो । म स्थायी समितिबाट निकालिएको हुँदा पोलिटव्युरोमा आउँदिन भनेँ । यदि मैले अपराध गरेको कारण पार्टीबाट निकालिएको थिएँ भने आज किन फेरी तपाईहरुले बोलाउनु हुन्छ, नभए म पोलिटव्युरोमा जाँदिन भनेँ । यदि मैले अपराध गरेको रहेछु भने भन्दिनुस मैले मेरो अपराधबारेको विवेचना स्वंयम गरौँला भन्दा माधवजीले मैले निकालेको जिम्मेवारी लिन्छु भन्नु भयो । साथै उहाँले मैले तपाईलाई जे सोचेर निकालेको थिएँ त्यो रहेनछ भन्नु भयो ।
एमालेले मेची महाकाली यात्रा गरी रहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? पार्टी प्रभाव बढाउनका लागि यो राम्रै कुरो हो । अहिलेको संविधानमा कमी होलान तर त्यसमा मधेसीलाई जति दिनु पर्दथ्यो त्यो धेरै नै दिइयो । गणतन्त्र आन्दोलनको माग थियो । त्यहाँ भन्दा अगाडि बाटोमा जे भेटिन्छ त्यो थप्दै थप्दै थप्दै धर्म निरपेक्षता, संघियता, समावेसिता आयो । मधेसीको कुरा पनि त्यस्तै भएको छ । त्यसैले त्यसलाई रोक्न एमालेको अभियान ठिक छ । मैले धेरै पहिले नै यस्तो अभियान चलाउनु पर्दथ्यो भनेर भनेको छु ।